taorian’ny fampiatoana ny fampianarana afak’omaly ka niteraka savorovoro teo an-toerana. Tsy mbola nisy nipika ny resaka hatramin’ny fotoana nanoratana ny vaovao. Mialoha io latabatra boribory io anefa dia nanizingizina ny tompon’andraikitra tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao fa tsy mbola tara ny fandoavana karama ny talata teo, omaly mantsy vao nifarana ny volana ary tsy nisy fe-potoana nipetraka tao anaty fifanaraham-piaraha-miasa mahakasika izany. Voalaza fa nanamaloka endrika ny « alliance française » iny fanapahana fampianarana iny ka noheverina ho hadisoana goavana ho an’ireo mpampianatra ny fitokonana.
Noraisin’ity ivontoeram-pianarana teny sy kolontsaina frantsay ity ho fahatapahana fifanekena arak’asa avy hatrany izany ka ireo izay tsy mamerina mametraka fangatahana asa sy fifanekena vaovao mialoha ny anio dia anisan’ireo efa tsy mpiasa ao intsony. Tetsy an-daniny anefa misy amin’ireo mpampianatra no resy lahatra fa tsy olana karama irery no notakiana fa ireo zo maro an’ny mpiasa tahaka ny tambin-karama, ny fizakana ny ara-tsosialy sy fahasalamana, ny fampiakarana ny mari-karama izay efa nilaozan’ny toetr’andro raha mitaha amin’ny firimorimon’ny vidim-piainana. Efa betsaka no lazain’ny mpiasa ho fifampiresahana toy izao fa nandamoka hatrany izany ka nahatonga azy ireo nidrikina. Mihevitra ny mpiasa sasany fa fandresena ho azy ireo ny faneken’ny filohan’ny filankevitra hiditra an-databatra boribory mba hanapotsirana ny tsy rariny sy handinihina ity fifanekena vaovao ity.